Fitaovana fanalefahana aretin-tsoavaly any Shina Manambo sy orinasa, mpamatsy Quotes | Jianeng
tara mampitsahatra Equipment
Tag Archives: Fitaovana fanalefahana asfalt
Fitaovana fanalefahana ny aspalenta - Mpanamboatra, orinasa, mpamatsy Avy any Sina
Ny tanky karazana bitumen vokarin'ny orinasa anay dia mety amin'ny fitahirizana sy fitaterana bitumen: miaraka amin'ny haavon'ny haavon'ny 55 cubic metaly, ary azo zarina sy apetraka miaraka amin'ny agitator. Ny tanky karazana bitumen dia mety tsara amin'ny fifindrana sy fitaterana aspirasy. Ny kamiao bitika karazana ao anaty tavoahangy dia azo atao amin'ny hafanana mitarika fandroana menaka, famatsiana herinaratra na fananganana mivantana ataon'ny mpandoro. Rehefa mandeha fiara mifangaro amin'ny fotoana mitovy, ny pipeline manoloana ny tank ca ...
Ny zava-maniry fitrandrahana bitumen novokarinay ny orinasa dia manana ny firafitry ny solika iray, ny fitoeran-drano mafana iray, ny rano mifangaro roa mifangaro, fitoeran-tsolika iray, fitoeran-jaza bitety, vinaingala bitety iray (ho an'ny fampiasana tetezamita), fantsom-pifandraisana hafainganam-pandeha azo ampiharina, iray boaty emulsion hafainganam-pandeha azo zahana. , fikosoham-bary iray, fanamafisana baomba bitety iray ary efitrano fanaraha-maso elektrika iray. Ary koa ny fantsom-pampidiran-tsolika hafanana mifandraika, fantsom-pifindrana bitumen, fantsona fifindrana emulsion. Mizara emulsion fambolena Bitumen ...
Ny panty bitumen modely SBS Polymer novokarinay dia manamafy ny famolavolana finday, izay mety tsara amin'ny fametrahana sy ny fanesorana. Ny tanke mifangaro dia miaraka amin'ny agitator fanaparitahana haingam-pandeha avo lenta mba hisorohana ny tsy fahampian'ny famenon'ny sbs sy bitumen. Raha tsy misy ny famelezana dia mety ho vokarina amin'ny fikosoham-bary raha manome sakafo. Ny pataloha bitumen modely SBS Polymer dia mizara roa: feno-mandeha sy semi-automatique. Ny zavamaniry PMB mandeha ho azy dia norefesina amin'ny alàlan'ny lanja fametahana sy ...
Ny silo fitehirizana mafana avy amin'ny orinasanay dia mizara ho karazana fiarovana miaro ny tontolo iainana sy ny karazana mahazatra: Azo ampitovina amin'ny zavamaniry mifangaro asfalt 80t / h-480t / h, ary azo ampiharina ihany koa ny boky araka ny fitakian'ny mpanjifa. Ny haavon'ny 160 taonina sy ambany dia afaka miditra amin'ny fitaterana entana. Ny orinasanay dia nanatsara ny fizotran'ny famokarana silo fitehirizana mafana nandritra ny taona maro, miaraka amin'ny fampisehoana azo antoka. Mitahiry betsaka ny fitehirizana ny tontolo iainana ...
Ny fanapahana bitumen vokarin'ny orinasa anay dia mora miasa sy mametraka: Ny tanky dia mizara roa amin'ny efitrano roa, ny faritra ambony dia miaraka amin'ny vainafo fananganana, ny rafi-pitondran-tena dia manosika ny paosy bitety tsirairay, ary ny bitety dia miempo amin'ny famafana. Ny menaka hafanana ambany dia hafanaina mba hanohizan'ny lelavola ny bitumen, ary avy eo dia ariana amin'ny fampiasana azy. Ny decumen bitumen dia azo ampidirina ao anaty fitoeram-pitaterana. Ny orinasantsika koa dia manamboatra fitaovana miempo (kitapo), cantilever cran ...
123456Manaraka> >> Page 1 / 26
Bins fitahirizana Bolt, Mobile tara Batching Station Lby1000 (80t / H) , godorao mampitsahatra Equipment , Drumn Melting Unit", Small Gold mampitsahatra lafaoro , tara mampitsahatra Equipment 、rehetra Products